ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးမှ နှစ်ကြိမ်စိန်ခေါ်သည့်အတွက် ကန့်ဘလူ သိမ်းဆည်းမြေယာ ဆွေးနွေးပွဲပျက်ဟု လယ်သမားများကဆို
ပို့စ်တင်ချိန် - 6/28/2014 11:29:00 AM
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှု ပြဿနာ ပြင်းထန် နေသော ကန့်ဘလူ မြို့နယ်တွင် လယ်ယာ မြေသိမ်း ဆည်း ခံထားရသည့် ကျေးရွာငါးရွာမှ တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် တပ်မတော် တာဝန်ရှိ သူများတို့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြရာတွင် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးက တောင်သူများကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် စိန်ခေါ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အတွက် ဆွေးနွေး ပွဲ ပျက်ပြယ်ခဲ့ ရကြောင်း ယင်းဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည့် တောင်သူများ ကပြောသည်။
“တောင်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ အခါ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက အစပိုင်းမှာ ပြည်သူတွေကို မိဘသဖွယ် ပြောနေ တာ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ သိမ်းဆည်း မြေယာအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တပ်ကနေ ဖြေရှင်းပေးတာ မကြိုက်ရင် ချက်ချင်း ထွက်သွားလို့ စိန်ခေါ်တယ်။
စိန်ခေါ်တာ နှစ်ကြိမ်တောင် အဲ့ဒါနဲ့ တောင်သူတွေ အကုန်လုံး ခန်းမထဲကနေ ထွက်ကုန်တာ။ ဆွေးနွေးပွဲ လည်း ပျက်သွားတယ်”ဟု အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည့် တောင်သူဦးကျော်ထွန်းနိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရှိ ဇီးကုန်းသကြားစက်ရုံတွင် ဇွန်လ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် တစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်တွင် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုး ဦးဆောင်သော တပ်မတော် တာဝန်ရှိသူများ၊ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံကျေးရွာ ငါးရွာမှ တောင်သူ ၂၀၀ ကျော်နှင့် တပ်မတော်က သိမ်းဆည်း မြေယာများပေါ်တွင် သီးစားချထားသူများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပွဲစတင်ပြီး နာရီဝက်အတွင်းပင် ပွဲပျက်သွားခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ကန့်ဘလူမြို့နယ် ငှက်ပျောတိုင်း၊ခအုံးတာ၊ ပေကြီး၊ ထောက်ရှာအိုင်၊ မြေမွန်စသည့်ကျေးရွာငါးရွာအတွင်းရှိ လယ်ယာမြေဧက တစ်သောင်းကျော်ကို တပ်မတော်မှသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲနေ့တွင် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက လက်ရှိတပ်မတော်မှ လုပ်ကိုင်သော မြေယာဧက ၅,၀၀၀ကျော်ကို မူလတောင်သူများအား ပြန်လည်မပေးအပ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး တပ်မတော်မှ သီးစားချထားသူများကိုသာ အကာအကွယ်ပေးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း တောင်သူများက ပြောသည်။
မြေပြင်တွင်မူ တပ်မတော်မှ လုပ်ကိုင်နေသည့်ဟုဆိုသည့် လယ်ယာမြေများမှာ တပ်မတော်သားများကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်နေခြင်း မဟုတ်ဘဲ တခြားသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသူများကိုသာ ပြန်လည်သီးစားချထားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လယ်အသိမ်းခံ တောင်သူများက ပြောသည်။
“တပ်ကသိမ်းထားတဲ့ မြေတွေထဲကနေ မြေဧက ၅,၅၁၈ ဧကကို ပြန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ မြေတွေကို တောင်သူတွေကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ပြန်မရဘူး။ သူတို့ချထားပေးတဲ့အတိုင်းဘဲ ရမယ်။ အဲ့ဒီလို တပ်ကဖြေရှင်းတာကို မကျေနပ်ရင် ထွက်သွားလို့ရတယ်လို့ စိန်ခေါ်တာ။
အဲ့ဒါနဲ့ မကျေနပ်ဘူးဆိုပြီး တောင်သူတွေ အကုန်ထွက်သွားတာဟု” ယင်းဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သော တောင်သူ ဦးဇော်ဝင်း မောင်က ပြောသည်။
လက်ရှိကာလအချိန်တွင် ကန့်ဘလူ မြို့နယ်တွင် တပ်မတော်မှ သိမ်းဆည်းထားသော လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် မူလဓားမ ဦးချ တောင်သူများက ပြန်လည်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ကြရာ တပ်မှ သီးစားချထားသူများ နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံကာ မြေယာအငြင်း ပွားမှုပြင်းထန်နေသည့် ကာလဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တပ်သိမ်းမြေတွင် မူလ တောင်သူများက ပြန်လည်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးချိန်တွင် တပ်မှသီးစားချထားသူများက မူလတောင်သူများကို တရားစွဲဆိုထားပြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင် တောင်သူစုစုပေါင်းရာကျော် တရားစွဲဆိုခံနေရကြောင်း ကန့်ဘလူနယ်ခံ လယ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးသူ ဦးကောင်းထွဋ်က ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲနေ့တွင် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက တပ်မတော်မှ သီးစားချလုပ်ကိုင်နေသော လယ်ယာမြေများပေါ်တွင် မူလတောင်သူများဝင်ရောက်ခြင်း မပြုနိုင်ရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား တိုးမြှင့်ချထားပေးရန်ကို သက်ဆိုင်ရာခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကြီးအား မှာကြားခဲ့ကြောင်း ယင်းဆွေးနွေးတက်ရောက် တောင်သူများကပြောသည်။
“ဆွေးနွေးပွဲ မလုပ်ခင်ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ပြဿနာတွေမတက်ရအောင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး နယ်လုံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်နိုင်နဲ့ တောင်သူတွေ ငှက်ပျောတိုင်းရွာမှာ အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာ။ တပ်မတော်က ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုး ကိုယ်တိုင်က တောင်သူတွေကို ရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ လယ်ယာမြေပြန်ရပြီဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကို ဆွေးနွေးပွဲသွားခဲ့တာ။ ဟိုရောက်တော့ ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်တော့ စိတ်ပျက်ကုန်တာ။
အမျိုးသမီး တွေလည်းပါတော့ သူတို့ဆို မျက်ရည်ဝဲပြီး ငိုမတတ်ကို ဖြစ်ကုန်တာ။ တောင်သူတွေကို ဆက်ဆံတာဆိုးတဲ့အတွက် တော်တော်လေးကို ခံစားရတယ်”ဟု ငှက်ပျောတိုင်းကျေးရွာမှ တောင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။ကန့်ဘလူတွင် ဖြစ်ပွားနေသော လယ် ယာမြေအငြင်းပွားမှုသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တောင်သူဦးရေရာကျော်ရှိပြီး ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု ပြင်းထန်နိုင်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေးဝန်ကြီးမှ ကျေးရွာများထိ အရောက်လိုက်လံကာ ညှိနှိုင်းခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲအား ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးမှ လယ်ယာအသိမ်းခံတောင်သူများအား ပြန်လည် ငဲ့ကွက်ထောက်ရှုခြင်း မရှိသည့်အတွက် ဆွေးနွေးပွဲပျက်ခဲ့ရကြောင်း လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံတောင်သူများက ပြောသည်။
The Farmer Media
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> political-news
ရင်သားတွဲ ကျခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော နည်းလမ်းများ
အလှပျက်စေသည့် အံ့အားသင့်စရာ အချက်များ
ဘင်္ဂါလီများကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သုံးသိန်းဖြင့် ရန်ကု...
အိန္ဒိယတွင် ငါးမျှားနေသူကို လှေပေါ်ထိတက်ပြီး ကျားဆွဲခဲ့
ဆန္ဒစွဲတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ နွှဲဆင်တဲ့လူ
ရုပ်ရှင်အကြိုခံစားခြင်း - မာယာနန်းတော်
အထည် ၃၇ ထည် ခိုးယူသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို စီစီတီ...
ပရိသတ်ရှေ့မှောက် လက်တွဲပြီးပြန်လာမယ့် No နဲ့ Bambino
၂၆ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် သတင်းထူးများ
၂၅ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် သတင်းထူးများ
ကျွဲသေက ပေးသော သင်ခန်းစာ
အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ယာဉ်နှစ်စီးချိတ်မိရာမှ ယာဉ်နှစ...
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်ရှစ်စီးဆင့်တိုက်မှု မွ...
လက်ပံတောင်း လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဓားထိုးခံရ
ထိုင်းမှာ ယာယီနေထိုင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ထုတ်ပေးမယ်
ဆမ်ဆောင်းအရောင်းမြှင့်ရန် 2NE1 ဖျော်ဖြေမည်
တပ်ကသိမ်းထားတဲ့ ဖရူးဆိုး လယ်မြေ ဧက ၂၀၀ နီးပါးကို အ...
စုန်း တကယ်ရှိ မရှိ
မဟာသန္တိသုခ အမှုရုံးချိန်း (ရုပ်/သံ)
စစ်တွေတွင်ဖမ်းမိသည့် ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦးကို ဒိုင်...
သစ်ခိုးထုတ်မှုတွေ ရှိနေဆဲဟု မြန်မာသစ်တော ဒုဝန်ကြီးဝ...
ဆွာရက်စ် ကိုက်တယ်။ ဘာလို့ ကိုက်လဲ ? Psychologistေ...
ကေတီဗွီ မာဆတ် လိုင်းကြေးယူသည့် ရဲများကို အရေးယူမည်
အရက်အတူသောက်ရာမှ စားခုတ်မှုဖြစ် သေဆုံး
၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အသုံးပြုရန် ဗိုလ်ချု...
ရဲအရာရှိ ၄၀၃ ဦးကို လာဘ်စားလို့ အရေးယူပြီ
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှင့် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပွား အစိုး...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် ထွက်လာ ဒီပဲ...
Android ကို ပိုမိုလုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ထားနိုင်မည့်...
ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ကျောင်းစာသင်ခန်းအတွင်း ၀င်ရောက...
တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများကို ကာကွယ်ပေးရန...
Teen Beauty လှချင်ရက် စက်စက်ယို
MH-370 အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ပျံသန်းနေစဉ် ပျက်ကျသွာ...
ချစ်သက်သေပြကာ ကားရှေ့ဝင်ပြေးအတိုက်ခံပြီး သေဆုံးခဲ့...
ဆင်းရဲစဉ်က စွန့်ခွာသွားသည့် ချစ်သူဟောင်းကို စိတ်ကူ...
အမေရိကန်-ဘယ်လ်ဂျီယံပွဲ ဘီယာကြေးလောင်းရန် ဘယ်လ်ဂျီယ...
ကင်ဆာနှင့် အကျိတ်ဆဲလ်များကို သေစေနိုင်သော ဗိုင်းရပ...